GT Racing 2 dia tonga tamin'ny endriny feno ao amin'ny Google Play | Androidsis
Roa volana lasa izay Gameloft dia nanolotra ny GT Racing 2 nifantohana amin'ny fiara Mercedes-Benz, fa anio ny lalao dia misy amin'ny Google Play feno miaraka amin'ny lisitry ny mpanamboatra.
GT Racing 2 dia maimaim-poana misintona ao amin'ny Google store ho an'ireo fitaovana manana Android 2.3 na avo kokoa, izay raha mila fitahirizana be dia be ianao satria mitazona 987 megabytes, koa manomàna fifandraisana Wi-Fi tsara hampidina an'io simulator hazakaza-piara tsara io.
GT-Racing 2 mitovy amin'ny Gran Turismo malaza na Forza amin'ny fomba fijery tsy mitovy amin'ny sariitatra hita ao amin'ny Asphalt ohatra. Ny fiaran-dalamby dia fomba Grand Prix, manana fizika tena izy izy io, toe-piainana isan-karazany ary fakan-tsary avy amin'ny sobaboky ny fiara.
Amin'ity kinova vaovao amin'ny GT Racing ity dia hahita fiasa gameplay vaovao ianao ary fiara mahazatra avy amina mpanamboatra 30 isan-karazany, ao anatin'izany i Nissan, Audi, Ferrari, Mitsubishi ary maro hafa. Misy be dia be ny maodely ho an'ny mpilalao tokana sy mpilalao marobe. Gameloft dia nilaza fa hanavao ny lalao isan-kerinandro amin'ny fanamby 28 vaovao.
GT Racing 2 misy amin'ny endriny feno ao amin'ny Google Play
Amin'ny maody fampielezan-kevitra ny fandrosoana dia mitovy amin'ilay hita ao amin'ny Asphalt 8. Manomboka amin'ny fiara ambany ianao, mahazo kintana hamaha hetsika vaovao, ary hahazo vola hividianana fanavaozana vaovao na fiara vaovao.
Miatrika lalao maimaim-poana izahay, izay midika hoe ahoana no hahalalanao an'izany tsy maintsy handany vola vitsivitsy ianao hahazoana ny vola ao anaty lalao hahazoana fanavaozana na fiara haingana kokoa.
Toy izany ny Gameloft dia nianatra avy amin'ny lesoka nataon'ny lohateny EA tahaka ny Real Racing, manamafy, «Tsy ilaina ny very fotoana hanamboarana na karazana vidiny hanamboarana ny fiara, tsy havelanay hiasa na handoa ny mpampiasa vao afaka mihazakazaka amin'ny hetsika iray".
Raha tia lalao fifaninanana fiara ianao aza mandany ny fotoananao amin'ny famakiana ireo andalana ireo ary mandehana mivantana amin'ny fampidinana GT Racing 2 avy amin'ny widget izay omenay etsy ambany.
Fanazavana fanampiny - Saika adiny iray amin'ny GT Racing 2: Ny lalao lalao Real Car Experience
GT Racing 2: Raiso ny Autospiel
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Azo alaina ao amin'ny Google Play izao ny GT Racing 2 an'i Gameloft
Gameloft dia toa nianatra avy amin'ny lesoka natao tamin'ny lohateny EA, toy ny Real Racing, nanamafy fa: "Tsy ilaina ny manary fotoana hanamboarana na karazana vidiny hanamboarana ny fiara, tsy avelantsika hanana ny mpampiasa miandry na mandoa vola vao afaka mihazakazaka amina hetsika ".
Sega nandefa ny Football Manager Handheld 2014